Miisaaniyadaha Maanta: Xfce iyo KDE Mac Style | Laga soo bilaabo Linux
Miisaaniyadaha Maanta: Xfce iyo KDE Mac Style
In kasta oo isticmaale gaar ah oo ka mid ah balooggan oo aanan sheegi doonin uusan taageersanayn wax xiriir la leh Mac OS X (OS X laga bilaabo hadda), waxaan dooneynaa inaan idinla wadaagno miisaskeena maanta waana hubaa in in kabadan hal in uu yeelan doono wadno qabad muuqaal ah 😀
Waad ogtahay, guddi kor, Meel hoose, waxoogaa astaamo ah iyo muuqaal la mid ah waxaanan horey u leenahay kuweenna OS X. Waxa ugu fiican oo dhan: Gebi ahaanba bilaash ah oo furan 😀
Wadada buuxda ee maqaalka: Laga soo bilaabo Linux » Muuqaal / Shakhsiyeyn » Miisaaniyadaha Maanta: Xfce iyo KDE Mac Style
hadday tahay9127 dijo
Midka koowaad ayaa weyn !!! XD
Ku jawaab sebas_vv9127
hehehe mahadsanid, taasaa iska leh hehehe 😀
Waan badalay hada, taasi waa, anoo rogay alwaaxyada ... Ma jecli gudida kore (sida Gnome), waan ka jeclahay hoosta iyo dekedda kore ...
In kasta oo isticmaale gaar ah oo ka mid ah balooggan oo aanan sheegi doonin uusan taageersanayn wax kasta oo la xiriira Mac OS X
Kaalay, taasi waa kuu wanaagsan tahay ... Ka daandaansiga safka hore.
Iima dhibayso in wax ay ku xiran tahay O $ X, waxa i dhibaya waa nuqulada.
Ahahaha xD, saamaynta dekeddu way maqnaan lahayd oo waxay lahayd hoos-hoos menu ah oo ka soo degta ah.
Waxaan ku helayaa Qaahira-Dock ... laakiin sida aad fahantay, kuma aanan rakibin shaashad dhakhso leh hehe
Newbies XD. Tani waxay ka mid ahayd miiskeygii hore:
Ma dhahday xDD
Xagee ka helaa liiskaas caalamiga ah?
Ku jawaab StevenDead
hahahaha kaalay, rikoodhka ... Ma jecli Mac-Style haha.
Waa mid ka mid ah desktops-yada aad u yar ee aan isticmaalo waana jeclaa, laakiin waa inaan iska fogeeyaa maxaa yeelay inta udhaxeysa bespin iyo menu-ka adduunka waxay wada cuneen wankii oo idil shilalkoodana badanaa
Supernovato ... Haddii aad rabto, waxaan ku tusi doonaa shaashadda KDE 3 oo leh muuqaal la mid ah that
Aad iyo aad ayey u fiican yihiin dhamaan seddexda, waa faahfaahin yar ... astaamaha kumbuyuutarka ee ku jira macOS X midig baa looga raran yahay. 🙂
Sidoo kale waan jeclahay iyaga maxaa yeelay waxay umuuqdaan nadiif, waxyaabo badan la'aanteed ... sidaan filaayo miiska waa inuu u ekaadaa.
HAHAHAHAHA waa wax layaableh in aan jeclahay desktop noocan oo kale ah (xitaa waaba yaab in taydu ay sidan tahay), haddii aad aragtay shaashadado kale oo aniga iga mid ah waad garan doontaa sida ay u rarnaayeen hahahaha.
Ha xusuusan maxaa yeelay inta udhaxeysa sooyaalkii xumaa ee reggaetonero iyo dhamaan dibindaabyada aad saartid waxay u egyihiin wadno xanuun muuqaal ah.
Aniga shaqsiyan ma ahi qof jecel "Sida Mac" oo kale, umuuqato mid aad uqurux badan, waxaan arkay asxaabta qaaliga ah ee Linux desktop xD
Aad ayuu u fiican yahay, ayuu ku leeyahay isticmaale isku mid ah Mac iyo Linux 😉
Kani waa miiskeyga 🙂
Minimalism Waxaan u maleynayaa in loo yaqaan 😀
taasi waa haddii ay tahay mid yar. ma waxay ku taal ubuntu?
Maya, Daniel, waa Tuquito 5 «Pampa»
Maya, shaashadda ugu horreysa waa KDE + ArchLinux, labada kalena waa XFCE + Debian 🙂
HAHAHAJAJAJAJA Halkaan waxaa ka jira jahwareer. Fadlan gaara akhri markale 🙂
HAHAHAHA runtii, markii aan faallooyinka u akhriyay si kale (iyadoo loo marayo guddiga maamulka) ma aanan arkin cidda aan la hadlayo gaar ahaan hahahahaha.
Taasi waa AWN? dulucda astaanta? way fiicantahay 😀
Haa, waa AWN. Ma xasuusto dulucda astaamaha 🙁 Waxaan kugu leeyahay. Haddii aan haysto si uun aan kuugu diro iyaga, adigaan kuu soo diri doonaa iyaga 😀
aad u qabow .. laakiin waxay u muuqan doontaa sida ugu fiican ee aan haysto, hehe, oo leh astaamaha astaanta Faenza Mac, iyo mawduuca gtk iMetalLeopard, Dock-ka waxaan haystaa DockBar X oo leh AWN ... ahh waxaan haystaa XFCE
Ka waran LinuxMint 12 oo aan la socdo XFCE, Docky iyo Conky, waxna ugama hinaasin O $ X
Ku jawaab chicharo
Miyuu wallpaper-ku fiicanyahay, ma waxaa loogu talagalay Fedora? 🙂
Ma waxaad u jeeddaa gidaarka ranjiga, ama kan digaagga isticmaala ee kor ka faallooday?
Haa, laakiin marwalba waad iloobeysaa wax aasaasi ah OSx, meeye menus? Sax AAD, oo wax la mid ah ayaa ku dhaca PearOS menus, menus-ka farxada leh waa inay noqdaan kuwa ugu sareeya hadii ay u egtahay OSX hadii aysan aheyn wax kalabar, taasi way maqantahay, Midnimadana waxay uqaadaneysaa si caadi ah, iyada oo aan liiska menu kor ku xusan u muuqanayn OSX ama kaftan, sidoo kale waa ku habboon tahay in aad ku hesho menusyada kor ku xusan oo aan codsi kastaa lahayn mid u gaar ah. salaan
Kootada Linux ee Hooseysa Bishii ugu Dambeysay Miyey Muhiim Tahay?